Mere Winter Train Travel na Italy bụ a ga- | Save A Train
Home > Travel Europe > Mere Winter Train Travel na Italy bụ a ga-
(Emelitere ikpeazụ On: 29/01/2020)
Ụgbọ oloko na-ụzọ kasị mma njem na Italy n'agbanyeghị nke oge. Otú ọ dị, ha-abụ odi mfe na ihe ọma na nhọrọ, karịsịa n'oge oyi. Winter ụgbọ okporo ígwè eme njem na Italy bụghị naanị mma, ma ọ bụ na- ngwa ngwa na oru oma.
The elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè e dị ka Trenitalia ọsọ nri ala n'etiti Italy. Trenitalia a na-akpọ Frecciarossa, Frecciargento or Frecciabianca depending on the line. Trains link practically every town or city in Italy, na-ewere gị na etiti nke ọ bụla ebe. Isi Ịkwụsị Salerno - Napoli (Naples) - Roma (Rome) - Florence (Florence) - Bologna - Milan (Milan) - Torino (Turin). Rome na Venice bụ a ezigbo 3 hour na minit 45 njem mgbe a ịkwada si Florence ka Rome bụ a mere 1 hour na 32 nkeji.
N'ihi na nke ndị na-agba na mma bụ isi maka Winter Train Travel na Italy, ị nwere ike ịga niile na mba n'elu ebe ngwa ngwa na comfortably. Ebe a na-n'elu obodo ise gaa ụgbọ okporo ígwè na Italy a oyi.
1. Naples – bụ ihe Anyị opener maka Winter Train Travel na Italy
Naples bụ ezigbo ndị na-achọ na-esi pụọ oyi. Ọ bụ mgbe niile anwụ na-acha na Naples! Mgbe ọ na-abịa Christmas ememe, Naples enwu n'elu niile obodo ndị ọzọ na Italy. Ha nwere Christmas amuru Mpaghara ga-ume gị pụọ. Ị ga-ahụ na ha niile obodo. Ọtụtụ ndị ga-ekweta na ihe ndị kasị mma na otu onye bụ na Via San Gregorio Armeno.
Rome ka Tuscany bụ a n'elu-aga Winter Train Travel na Italy n'ihi na ọ bụ a obere na otu awa na ọkara ụgbọ okporo ígwè pụọ. Ị nwere ike amalite ụbọchị gị na Italy isi obodo ụtọ ezumike ahịa na-eleta Vatican ngosi ihe mgbe ochie. site nri ehihie, ị pụrụ hop na a ụgbọ okporo ígwè na-erughị awa abụọ, chọta onwe gị na ọmarịcha Tuscany. Were a itinye na thermal mmiri spas ka okpu anya gị ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ oyi dreary na ịkpọ colder weather; mgbe zụọ njem ka Palermo. Sicily bụ gị ụzọ mgbapụ si chilly ugwu Europe dị ka ọ na-enye ihe ikuku na-ele nso n'oge okpomọkụ ma ọ bụ spring. Ị nwekwara ike nyere aka, ma na-ada na ịhụnanya na obodo Christmas ahịa, amuru Mpaghara, na ochie amara.
Gaba elu ugwu obodo nke na Turin ma ọ bụrụ na a oyi ski getaway bụ gị echiche nke oyi fun. Turin bụ gị Winter Train Travel na Italy ọnụ ụzọ ámá na Alps. Ị gaghị agbaghara Luci d'Artista. Ọ bụ kwa afọ dịkọrọ ndụ art ngosi na ìhè nwuo obodo ikpọ ìhè nrụnye.
Winter na Venice pụtara dị ọcha, crisp ikuku na ole na ìgwè mmadụ megharịa gị si na ya mara mma. Enwe a gondola ride ma ọ bụ inu kọfị na square. E nwere bụ mgbe ohere nke ìhè snoo na-ada ka gị Venice ahụmahụ ọbụna ihe kpokọtara.
Olee otú ịzụta tiketi maka Winter Train Travel na Italy
Ịzụ tiketi n'ọdịnihu na-eme ka ndụ gị na-erughị na-akpata nchekasị. maka anya ụgbọ oloko dị ka Frecciarossa, Frecciargento, frecciabianca, reserved seating is mandatory.
Ịzụ a tiketi na onye ọdụ bụ mgbe otu nhọrọ. Otú ọ dị, a kwadebere maka ogologo edoghi na mgbaka na elu ahịa. Na nke a na ụbọchị na afọ, ọ na-na-ahụkarị na-edebe gị ụgbọ okporo ígwè oche online. Mgbe ọ na-abịa otú anya tupu ị pụrụ ịzụta gị tiketi, azịza ga-adabere na ụdị Italian ụgbọ okporo.
Frecce ụgbọ oloko bụ elu-ọsọ ụgbọ oloko na-agba ọsọ n'etiti Italy si isi obodo. Ị nwere ike ịzụta gị tiketi ka n'oge dị ka ọnwa anọ tupu njem gị ụbọchị. na nso nso, Trenitalia mara ọkwa na ọ ga-amụba ya ntinye akwụkwọ mmiri ka 6 ọnwa n'ihu.
Akwụkwọ gị oche tupu, na ị ga-ọbụna na-enwe ụfọdụ ịrịba discounts. Ọ bụ ihe kacha mma ịzụta gị tiketi ma ọ bụrụ na ị bụ n'aka gị njem ụbọchị dị ka ego na tupu tiketi ndị a na-abụghị ndị na-agbanwe agbanwe ma na-abụghị refundable. Kpọtụrụ Save A Train maka ajụjụ ọ bụla na oyi ụgbọ okporo ígwè eme njem na Italy.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/winter-train-travel-italy/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / zh-CN na / es ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys Atụmatụ trainjourney Tranride ụgbọ oloko traintip ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ ụgbọ okporo ígwè njem Travel travelitaly